Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Neurofibromatosis ကော်ဖီရောင် အသားပိုလေးတွေ
Neurofibromatosis ကော်ဖီရောင် အသားပိုလေးတွေ
24 Feb 11, 12:07
Neurofibromatosis type-2 ဆိုတာ ဘာရောဂါကို ခေါ်တာပါလဲ။ မနေ့က ဆေးရုံမှာ ဆေးစစ်ရင်း ဆရာဝန်က အဲဒီရောဂါ ရှိတယ်လို့ ပြောတယ်။ အသက် ၃၇ပါ။ ရင်ဘတ်မှာ ကော်ဖီရောင် အစက်လေးနဲ့ အသားပိုလေးတွေ တွေ့လို့။ တကိုယ်လုံး ရှာကြည့်တော့ သုံးလေး နေရာတွေ့ရတယ်။ အဲဒါ စိုးရိမ်ရတဲ့ ရောဂါလား။ ကင်ဆာတွေဘာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါလား။ အသားပို ဆိုပေမယ့် ကြွက်နို့လိုမျိုးလည်း မဟုတ်ပဲ သူက ပျော့ညံ့ညံ့ အသားပိုလေး ဖြစ်နေပါတယ်။
Neurofibromatosis ဟာ မွေးရာပါ အာရုံကြောရောဂါတခု ဖြစ်တယ်။ အသားပိုလို့ ခပ်လွယ်လွယ်ခေါ်တဲ့ (တစ်ရှူး) တွေ လိုတာထက် ပိုပြီး၊ ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ ပွါးများ-တိုးပွါးလာတာဟာ Tumor အမျိုးအစားထဲမှာ ပါတယ်။ ဒီအုပ်စုကို ကင်ဆာနဲ့ ကင်ဆာ-မဟုတ်တာဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိတာမှာ အခုရောဂါက ကင်ဆာ-မဟုတ် အုပ်စုထဲကပါ။
ဆေးစာမှာ cafe-au-lait spots လို့ ခေါ်တာမို့ မေးတဲ့သူကနေ ကော်ဖီရောင် အစက်လေးလို့ ဖေါ်ပြချက်က တကယ့် ကွက်တိပါဘဲ။ စစချင်း ကော်ဖီရောင် ခပ်ညိုညို အစက်အပျောက်လေးကို စတွေ့တာချည်းဘဲ။ ဘယ်လိုမှလဲ မနေဘူး။ ယားလဲမယား၊ နာလဲ မနာပါ။ မျက်နှာ၊ လက်၊ ပေါင်၊ ကိုယ် ဘယ်နေရာမှမဆို ပေါ်နိုင်တယ်။ ပျော့စိစိနဲ့ ဘေးနှုတ်ခမ်းက သိပ်ချောမွေ့တာမို့ Coast of California (ကာလီဖိုးနီးယား) ကမ်းခြေလို့ တင်စားတယ်။
1. အမျိုးအစား (၁) က ၉ဝ% နဲ့ အများဆုံးဖြစ်တယ်။ (ခရိုမိုဇုမ်း ၁၇) မှာ ပြဿနာဖြစ်တယ်။
2. အမျိုးအစား (၂) ကို Central neurofibromatosis ခေါ်တယ်။ ၁ဝ%၊ (ခရိုမိုဇုမ်း ၂၂) မှာ ပြဿနာဖြစ်တယ်။
3. တတိယအမျိုး Schwannomatosis ဆိုတာ ၁ နဲ့ ၂ ရောဖြစ်တာ။
ကလေး မွေးမွေးချင်း ခေါင်းကို ပေကြိုးနဲ့ တိုင်းတယ်။ နည်းတာ မကောင်းသလို များတာထဲမှာ ဒီရောဂါလဲ ပါတယ်။ ကလေးဘဝ ကတည်းက ရောဂါစတွေ့တာလဲ ရှိတယ်။ များသောအားဖြင့် ၃-၁၆ နှစ်အရွယ်မှာ သိတာများတယ်။ အဓိက အရေပြားနဲ့ အရိုးမှာ လာပေါ်တယ်။ အရိုးမှာ ဖြစ်ရင် အရိုးပုံမမှန်တာ တွေ့လာနိုင်တယ်။ ဦးနှောက် နဲ့ ခါးရိုးထဲက အာရုံကြောတွေမှာလဲ ဖြစ်တဲ့သူတွေ ရှိတယ်။ အသက်ကြီးရင် များများလာတယ်။ အရုပ်ဆိုးလှတယ်။ အသက်ကို ဒုက္ခမပေးဘဲ ကြီးတဲ့အထိ နေသူတွေ အများကြီးဘဲ။
အမျိုးအစား (၂) က နဲနဲကြီးမှ သိတာများတယ်။ နားမှာ လာဖြစ်ရင် အကြားကို ထိခိုက်နိုင်တယ်။ ဟန်ချက်ကို ထိန်းရတာ ခက်ခဲနိုင်တယ်။ လူပျို-အပျိုရွယ်မှာ နားကောင်းကောင်း မကြားရင် ဒီရောဂါ ဟုတ်-မဟုတ် စစ်ရမယ်။ နားထဲမှာ အသံဆူနေတာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ခေါင်းကိုက်မယ်၊ မျက်နှာက နာနေမယ်၊ အားယုတ်မယ်၊ ကိုယ်ကို ထိန်းရတာ မငြိမ်ဘူး။ ဦးနှောက်-အာရုံကြော နံပါတ် (၈) ကို စစ်ရတယ်။ ငယ်ငယ်နဲ့ မျက်စိတိမ် ရှိ-မရှိကြည့်ရမယ်။ မျက်စိမြင်လွှာ စစ်ရမယ်။ စောစောကတည်းက MRI ရိုက်လို့ တွေ့ရင် သေးသေးကတည်းက ခွဲလိုက်နိုင်တယ်။ လုံးဝကောင်းသွားမယ်။
တတိယအမျိုး ခေါ်နိုင်တဲ့ Schwannomatosis ဖြစ်ရင် ဦးနှောက်-အာရုံကြော နံပါတ် (၈) ကလွဲရင် တကိုယ်လုံးမှာ ပေါက်နိုင်တယ်။ အာရုံကြောကိုဖိလို့ နာတာက အဓိက လက္ခဏာဖြစ်တယ်။ တချို့ကျင်မယ်၊ ထုံမယ်။
1. Seizures တက်တာ၊ အမျိုးအစား (၁) ၄ဝ%၊
2. High blood pressure သွေးတိုးတာ၊
3. Scoliosis ခါးရိုးရောဂါ၊
4. Speech impairment စကားပြောချို့ယွင်းတာ၊
5. Optic nerve tumors မျက်စိထိခိုက်တာ၊
6. Early or delayed onset of puberty လူပျို-အပျိုဖြစ် စော-နောက်ကျတာ၊
7. Cancer ကင်ဆာပြောင်းတာ ၃-၅% ဖြစ်တယ်။
သူဖါသာ မပျောက်ပါ။ ရုပ်အမြင် ကောင်းချင်လို့ ခွဲထုတ်နိုင်တယ်။ ဆက်တွဲ လက္ခဏာကြောင့်လဲ ခွဲရမယ်။ ရှားရှားပါးပါး (၁) ကနေ ကင်ဆာ ပြောင်းသူတွေကို ဆေးပေးကုနိုင်တယ်။ အောင်မြင်နှုန်း မဆိုးပါ။
၁၈၈၂ တုံးက ဂျာမန် ဆရာဝန် ကနေ စတွေ့တာမို့ သူ့နာမယ်ယူပြီး von Recklinghausen disease ရောဂါလို့ နာမယ် ပေးခဲ့တယ်။ အခု အမျိုးအစား (၁) ကိုသာ အဲလိုခေါ်တယ်။ Neurofibromatosis Association အသင်းက အကောင်းမြင် ရှိတယ်။ နောင် ၅-၁ဝ နှစ်မှာ ကုသနည်းပေါ်နိုင်တယ်လို့ ပြောတယ်။